IHultfred hostele | Tyelela uHultsfred
ekhaya » yokuhlala » Hostele » IHultfred hostele
Ihostele esembindini weHultfed.
Iibhedi ezingama-25 kumagumbi aphindwe kabini, iindawo zokulala kunye namagumbi osapho. Ikhitshi elitsha langoku lokuzenzela ukutya kunye negumbi lokutyela ekwabelwana ngalo.
Ishawa ekwabelwana ngayo, iWC, indlu yangasese ekhubazekileyo kunye negumbi leTV. Ihostele ikumgangatho wesithathu, ilifti iyafumaneka. Ukupaka kufutshane nehostele.
IVästra Långgatan 42, 577 30 IHultfred, Sverige
14 uphononongo kuGoogle
Ndifane nekhaya lam lesibini- akukho nto ndinokukhalaza ngayo kwaphela.
3/5 2 kwiminyaka eyadlulayo
+ icocekile kwaye intsha + kulula ukuyipaka + ikhitshi enezixhobo ezifanelekileyo - ukukhanya okungakhanyisiyo kwefluorescent kuyo yonke ihostele- kushushu kakhulu kwigumbi (bekukho ngoJuni) - bekungekho lula ukufumana nabasebenzi
3/5 3 kwiminyaka eyadlulayo
Oyinyumba kodwa osebenzayo. Ixabiso elibizayo kodwa elilungileyo. Indawo inokuba yindawo entle kodwa kulula ukuyipaka.
Intsha kwaye intle, iodolo elungileyo ekhitshini.
Kuhle, kucocekile kwaye kucocekile, iibhedi ezilungileyo kunye nabasebenzi abanobuhlobo.